Abacwaningi babangela ukuthi amakhompiyutha abantu bavakashele ngasese amawebhusayithi angahle avinjelwe ohulumeni abacindezelayo.
Ngo-Mashi 2014, uSam Burnett noNick Feamster basungula i-Encore, uhlelo lokuhlinzeka ngezilinganiso zangempela zesikhathi kanye nezomhlaba zokucwaninga kwe-intanethi. Ukwenza lokhu, abacwaningi, ababeseGeorgia Tech, bakhuthaza abanikazi bewebhu ukuba bafake lesi snippet encane kumakhodi omthombo wamakhasi abo ewebhu:
Uma kwenzeka uvakashele ikhasi lewebhu ngalokhu kukhishwa ikhodi kuyo, isiphequluli sakho sewebhu sizozama ukuxhumana newebhusayithi abacwaningi abaqaphele ukucwaninga okungenzeka (isibonelo, iwebhusayithi yeqembu lezombusazwe elivinjelwe). Khona-ke, isiphequluli sakho sewebhu sizobika kubacwaningi ukuthi ngabe sikwazi yini ukuxhumana newebhusayithi engavinjelwa (isithombe 6.2). Ngaphezu kwalokho, konke lokhu ngeke kubonakale ngaphandle uma uhlola ifayela le-HTML yomthombo wekhasi lewebhu. Lezo izicelo zekhasi lesithathu ezingabonakali zivame kakhulu kuwebhu (Narayanan and Zevenbergen 2015) , kodwa azivame ukuhilela imizamo ecacile yokukala ukucwaninga.
Umdwebo 6.2: Isimiso somklamo wokucwaninga we-Encore (Burnett and Feamster 2015) . Iwebhusayithi yokuqala evela enkampanini encane ehlanganisiwe kuwo (isinyathelo 1). Ikhompyutha yakho ihumusha ikhasi lewebhu, elibangela umsebenzi wokulinganisa (isinyathelo 2). Ikhompiyutha yakho izama ukufinyelela okuhloswe kwesilinganiso, okungaba yiwebhusayithi yeqembu lezombangazwe elivinjelwe (isinyathelo 3). Ukucwaninga, njengohulumeni, kungavimbela ukufinyelela kwakho ekuhlosweni kokulinganisa (isinyathelo 4). Okokugcina, ikhompyutha yakho ibika imiphumela yalesi sicelo kubacwaningi (engaboniswa kulo mfanekiso). Burnett and Feamster (2015) imvume evela ku- Burnett and Feamster (2015) , isibalo 1.
Le ndlela yokulinganisa izinkampani inezindawo ezithile zobuchwepheshe obukhangayo. Uma inani elanele lewebhusayithi lifaka le ncazelo yekhodi elula, kanti i-Encore inganikeza isikhathi sangempela, isilinganiso esilinganiselwe esiphezulu sokuthi amawebhusayithi ahlaziywe kanjani. Ngaphambi kokuqalisa iphrojekthi, abacwaningi bavumelana ne-IRB yabo, enqabe ukubukeza iphrojekthi ngoba kwakungeyona "ukucwaninga ngezifundo zabantu" ngaphansi koMthetho ovamile (isethi yemithetho eqondisa ucwaningo oluxhaso olusezingeni eliphezulu e-United States; ngolwazi olungaphezulu, bheka isithasiselo somlando ekupheleni kwalesi sahluko).
Ngokushesha emva kokuqala kuka-Encore, uBen Zevenbergen, ngaleso sikhathi owayesesimfundela, waxhumana nabacwaningi ukuthi abuze imibuzo mayelana nokuziphatha kwalo msebenzi. Ikakhulukazi, uZevenbergen wayekhathazekile ukuthi abantu emazweni athile bangahle babonakale besengozini uma ikhompiyutha yabo izama ukuvakashela amawebusayithi athile azwelayo, futhi laba bantu abavumelanga ukubamba iqhaza kulolu cwaningo. Ngokusekelwe kulezi zingxoxo, ithimba le-Encore liguqule iphrojekthi ukuthi izame ukulinganisa ukucelwa kwe-Facebook kuphela, i-Twitter, ne-YouTube ngoba imizamo yesithathu yokufinyelela la masayithi iyajwayelekile ngesikhathi sokuphequlula kwewebhu evamile (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Ngemuva kokuqoqa idatha ngokusebenzisa le design design, iphepha elichaza indlela kanye neminye imiphumela yathunyelwa SIGCOMM, inkomfa ehloniphekile yesayensi yekhompyutha. Ikomidi lesikhampasi lazisa ukubaluleka kwezobuchwepheshe bephephandaba, kodwa laveza ukukhathazeka ngokuntuleka kwemvume enolwazi evela kubahlanganyeli. Ekugcineni, ikomidi lesigceme sanquma ukushicilela leli phephandaba, kodwa ngesitatimende sokusayina esichaza ukukhathazeka (Burnett and Feamster 2015) . Isitatimende esinjalo sokubhalisa sasingakaze sisetshenziswe ngaphambi kwe-SIGCOMM, futhi leli cala liye laholela engxoxweni eyengeziwe phakathi kososayensi bekhompiyutha mayelana nesimo sokuziphatha ekucwaningweni kwabo (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) .